Edna Aadan oo loo magacaabay ergayga Somaliland ee wadahadallada Soomaaliya - BBC News Somali
Madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqaday madaxbanaanida ee somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa u magacaabay Edna Aadan Ismaaciil inay noqoto ergeyga Soomaaliland u qaabilsan wadahadallada somaliya iyo somaliland .
Marwo Edna Aadan Ismaaciil ayaa ah haweenay aqoonyahanad ah islamarkaana waxa ay horay u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland.
Wadahadallada dowladda fedaraalka iyo Somaliland ayaa hakad ku jiray muddooyiinkii ugu dambeeyay mana cadda wakhtiga ay dib u billaaban doonaan.
Dhanka kale, Madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqaday madaxbanaanida ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii wasaaradda xiriirka golayaasha, cilmi-baarrista iyo teknoloojiyada Cali Xaamud Jibriil .
Warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada laguma sheegin sababta wasiirkan oo ahaa wasiirka ugu dhowaa madaxweyne xigeenka somaliland xilka looga qaaday .
Axmed Xaaji Daahir Cilmi oo hore u soo qabtay xilal wasiirnimo xukuumadii Daahir rayaale Kaahin , ayaa loo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha, cilmi baarrista iyo teknoolojiyadda.
Maxay u adagtahay in dadka qaar ay farxad helaan?
TOOS Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay xariga abwaan la sheegay in loo haysto riwaayad uu sameeyay
Sidee dalkan yari ugu babac dhigayaa Shiinihii weynaa?
Nin sheegay in uu meel ku ogyahay diyaaradda la waayay ee MH370
Nin kala bar laga siiyay dhagxaan qaali ah oo uu meel ka helay
Muxuu yahay "isku dayga dil" ee Erdogan ka badbaaday?